Tungsten Ring, Tungsten သံမဏိကွင်း၊ Tungsten Carbide Rings - Ouyan
အမျိုးသား ၀ တ်လက်စွပ် Retro Solid Glossy Sq ...
6mm Tungsten Ring အမျိုးသမီး ၀ တ်လက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင် ...
အမျိုးသား၏ 6mm Tungsten Carbide လက်စွပ် ...
The Dark Luminous Tungsten R တွင် Cool Style Glow ...
အပြာရောင် Backgrou နှင့်အတူထူးခြားသော Silver Celtic နဂါး ...
လက္ကားအမျိုးသားလက် ၀ တ်ရတနာ 18K Gold Plated Black Gro ...
Hot Sell အပြာရောင် Plated Tungsten Carbide နှင်းဆီရွှေရောင် ...
6mm Unisex ကြွေကြွေပြားခင်းထားသော Matte Surface အနက်ရောင် ...
Blue Groove 8mm အမြင့်ပိုလန် Tungsten Carbide ကျွန်ုပ်တို့ ...
၈ မီလီမီတာထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ယောက်ျားလေးများ Tungsten ring ...
ဖက်ရှင်သံမဏိလက်စွပ် ... \_ t
အဆိုပါစက်ရုံသံမဏိရိုးရှင်းသော Jawless ဦး ခေါင်းခွံ ...
လက္ကားဖက်ရှင်လက်စွပ် Choker ကြေညာချက်ငွေ ...
Jewelers သံမဏိအပြာရောင် Tone Vintage အခမဲ့ ...
အမျိုးသားစီးသံမဏိ Ring Spade Ace Blac ...
အမျိုးသား ၀ တ်နှစ်ကြိုးပါ ၀ င်အရည်အသွေးမြင့် Lea ...
အမျိုးသား ၀ တ်လက် ၀ တ်ရှိသောလက်ကောက်၊
M အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောသားရေလက်ကောက် ဦး ခေါင်းခွံလက်ကောက် ...
အမေရိကန်အလံအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်လက်စွပ် Black Eng ...
Jewelers ရိုးရှင်းသောရိုးရိုးရိုးရိုးသံဖြူစတီး ...
Guangzhou Ouyan ၏လက်ဝတ်ရတနာကုမ္ပဏီကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောအမျိုးသားလက်ဝတ်ရတနာများကိုထုတ်လုပ်သည်။ လက်စွပ်၊ လက်ကောက်၊ အဖြိုက်နက်၊ သံမဏိ၊ ကြွေထည်နှင့်တိုက်တေနီယမ်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည်။ ၀ ယ်သူများ၏လိုဂို၊ အဓိကစျေးကွက်ဖြစ်သောအမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ အီဂျစ်စသည်တို့နှင့် OEM / ODM လုပ်ခြင်း။
Mens Square Red Garnet ပတ္တမြားသံမဏိ Sol ...
Retro Vintage သံမဏိ Four-Point ကြယ်ပွင့် ...
အမျိုးသားဖက်ရှင်သံမဏိလက်စွပ် ဦး ခေါင်းခွံ ...
အမျိုးသမီး ၀ တ်အမဲရောင်အနက်ရောင် ဦး ခေါင်းခွံ ...
Retro စတိုင်ကျဲကျိတ်သစ်သားသစ်သားသံကြိုး ...
သဘာဝ 8mm Tungsten Carbide လက်စွပ်ကို Arr နှင့်အတူ ...
အမျိုးသား၏ 8mm Opal နှင့် Abalone Shell Tungsten ...
အနက်ရောင် Obsidian Braided သားပုတီးလက်ကောက် ...
Mens Womens လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Multi-Strand Black Red Br ...
သင်ဘယ်တော့မှခြစ်ရာမကျသည့်၊ သင်ဝယ်လိုက်သောနေ့ကဲ့သို့လှပသောလက်စွပ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်မည်ဆိုပါစို့။ သန့်စင်သောအဖြိုက်နက်သည်အလွန်အကြမ်းခံသောသတ္တုမီးခိုးရောင်သတ္တုဖြစ်သည်။
Ring ထူနှင့် Ring Wid အကြောင်း
လက်စွပ်အထူအတွက်စံတိုင်းတာမှုမရှိပါ၊ ထုတ်လုပ်သူများစွာသည်အထူအလွန်ကွဲပြားသည့်ကွင်းများကိုဖန်တီးကြသည်။ သို့သော်လက်စွပ်၏အထူသည်သင့်ကိုသက်ဆိုင်လျှင်သင်၏ရတနာသည် ...
အဘယ်ကြောင့် tungsten သံမဏိကိုရွေးချယ်ပါ
Guangzhou ouyuan ဟာ့ဒ်ဝဲလက်ဝတ်ရတနာသည် ၁၀ နှစ်အထက်အမျိုးသားလက်ဝတ်ရတနာစက်ရုံများဖြစ်သည်။ လုပ်သား ၃၀ ပါ ၀ င်သည့်စက် ၅၀ ကျော်နှင့်ပြည့်စုံသောကွင်းများအတွက် 10QC ရှိပါသည်။ ဒီမှာအများကြီးစတိုင်များ ...
လက်ဝတ်ရတနာအတွက်ပစ္စည်းများအများအပြားရှိသည်။ ယောက်ျား၊ မိန်းမများအတွက်အရေးမပါ။ s925 silver, gold၊ ceramic, သစ်၊ stainless steel, titanium နှင့် tungsten carbide စသည်တို့ဖြစ်သည်။ လူအများစုကထူးဆန်းလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် ...
အဖြိုက်နက်သံမဏိဆိုတာဘာလဲ Tungsten သံမဏိသည်အာကာသကြွေထည်များပြီးနောက်အစုလိုက်အပြုံလိုက် ၀ ယ်သူများလိုက်လံရှာဖွေသည့်အခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအာကာသလွန်းပျံယာဉ်၏အာကာသနည်းပညာတွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးယခု၎င်းသည်စီအိုင်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
Tungsten လက်စွပ်, အဖြိုက်နက် titanium လက်စွပ် 8mm, မင်္ဂလာဆောင်လက်စွပ်စိန်နှင့်ရွှေ, အနက်ရောင် Tungsten အမျိုးသားလက်စွပ်, Tungsten လက်စွပ်အရွယ်အစား 15, အနက်ရောင် tungsten ယောက်ျားရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခညျြအနှော,